24 Mey 2020 - FJKM Québec - Canada
24 mai 2020 by FJKM-QUEBEC
Ny Fanahin’Andriamanitra mitoetra ao amin’ny olony
SAMOELA FAHAROA 23 : 1-7
23:1 Hoy i Davida, zanak’i Jese, dia ny lehilahy izay voasandratra ho ambony, ilay voahosotry ny Andriamanitr’i Jakoba sady mpanao fihirana mahafinaritra amin’i Israely:
23:2 Ny Fanahin’i Jehovah no mampiteny ahy, ary ny teniny no eo amin’ny lelako;
23:3 Andriamanitr’i Israely manao hoe: Eny, ny Vatolampin’i Israely miteny amiko hoe: Indro ny Mpanapaka ny olona; marina Izy sady manapaka amin’ny fahatahorana an’Andriamanitra;
23:4 ary izany dia toy ny fahazavan’ny maraina, raha miposaka ny masoandro, dia ilay maraina tsy misy rahona iny; ary ny ahitra manorobona amin’ny tany noho ny hainandro manarakaraka ny ranonorana. Ary tsy toy izany indrindra amin’Andriamanitra va ny taranako? Fa fanekena mandrakizay no nataony tamiko, voalamina amin’ny zavatra rehetra sady voatandrina; fa ny famonjena ahy rehetra sy ny iriko rehetra, moa tsy hampitsimohiny va?
23:6 Fa ny tena ratsy fanahy rehetra kosa dia tahaka ny tsilo ariana, fa tsy azo raisin’ny tanana izy;
23:7 ary ny olona izay mikasika azy dia tsy maintsy mitondra vy sy zaran-defona; ary hodorana amin’ny afo avokoa amin’izay itoerany ireny.
Hitantsika eto ny teny farany nataon’i Davida mpanjaka :teny izay nentiny nijoro vavolombelona tamin’izay asan’ny Fanahin’ Andriamanitra teo amin’ny fiainany.
Aseho fa tena miavaka taminn’y olona rehetra i Davida noho ny asan’ny Fanahin’Andriamanitra teo aminn’y fiainany.Voahosotra ho mpanjakan’Israely izy .Teo koa ny fanomezam-pahasoavana ka nahafahany namorona Salamo fanehoana ny finoany an’ Andriamanitra .Tsarovy àry fa rehefa mitoetra ao anatinao ny Fanahy Masina dia avahan’ Andriamanitra amin’ny olona rehetra ianao . Ary ho fanampin’izany ny fanomezam-pahasoavana samihafa izay entinao manompo Azy ho fanehoana ny finoana.
2-Mampahatsiahy ny teny fampanantenana
Isan’ireo mpanjaka tena niavaka i Davida .Mpanjaka filamatra teo amin’Israely izy . Nampanantenain’Andriamanitra izy fa hisy hatrany amin’ny taranany hanapaka eo amin’Israely . Noho ny fitarihan’ny Fanahin’Andriamanitra dia indro izy maneho ilay taranany , Ilay Mpanjaka ho avy hanapaka ny olona amin’ny fahatahorana an’ Andriamanitra , hitondra fahazavana sy fiainana, eny famonjena ho an’ny olona rehetra .Tanteraka tao amin’i Jesoa Kristy io teny fampanantenana io . Araka izany , ny mpino manana ny Fanahin’ Andriamanitra dia mampahatsiaro hatrany ny teny fampanantenana mba ho fampaherezana ny hafa.
Hainao ve ny mampiasa ny fanomezam-pahasoavana nomen’Andriamanitra?